Python2 Lesson2- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 2
Python2 Lesson 2
by KhitMinnyo on October 17, 2017 in Python-for-Hackers
Lesson 1 မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် ဖတ်ရန် ⊳⊳ဒီနေရာကို⊲⊲ နှိပ်ပါ
>>>> Input Methods <<<<
x = input("Enter any number you like.")
y = input("Enter next number.")
အထက်ပါ ပုစ္ဆာ ကို လေ့လာပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် စမ်းကြည့်ပါ။
x = raw_input("Enter any number you like.")
y = raw_input("Enter next number.")
ပုစ္ဆာ ၂ခုရဲ့ ကွဲလွဲချက်ကို သင်ရှာတွေ့ပါသလား။
ဒီအချက်ကို အရင် ရှာပြီးမှ အောက်ပါအဆင့်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါ။
မတွေ့ရင် ပြောပြပါမယ်။ တွေ့ရင်လည်း ခု ပြောမယ့် အဖြေနဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါဦး။
ပထမပုစ္ဆာမှာx=2, y=4 ထားခဲ့တာဖြစ်လို့
x+y သည် 2+4 = 6
x*y သည် 2*4 = 8 ရပါတယ်။
ဒုတိယ ပုစ္ဆာမှာလည်း x=2, y=4 ပါပဲ။ တူအောင်ထားမှ ကွဲလွဲမှုကို တွေ့လွယ်ပါမယ်။
x+y မှာ ၂ခု ပေါင်းတာပေမယ့် '24' ရပါတယ်။ အဖြေမှားနေတာလား?
x*y မှာတော့ ပိုဆိုးသွားတယ်
ဆိုတဲ့ error ကြီးပဲ တွေ့ရမှာပါ။
ဒါကို ဆက်မဖြေခင် အောက်ပါ ပုစ္ဆာ ၂ခုကို ထပ်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ပုစ္ဆာက အတူတူပါပဲ။ မတူတာက x, y ပါ။ အောက်ပါ ပုစ္ဆာ ၂ခုလုံးရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နေရာမှာ
x = Mg, y = Zaw ဆိုပြီးအတူတူ ဖြေကြည့်ပါ။
x = input("Enter your first name.")
y = input("Enter your last name.")
ဒီနေရာမှာတင် တစ်ကြောင်းစီမှာ error တက်လာတာ စ တွေ့ရပါမယ်။ ဒုတိယပုစ္ဆာကို ဆက်သွားပါဦး။
x = raw_input("Enter your first name.")
y = raw_input("Enter your last name.")
x+y မှာ 'MgZaw' လို့ ပြမှာဖြစ်ပြီး
y+x ဆို 'ZawMg' လို့ ပြပါလိမ့်မယ်။
user input method ၂မျိုး ရှိပေမယ့် မတူညီကြောင်းပေါ့။
input နဲ့ raw_input မှာ
input က ကိန်းဂဏန်းတွေကို သိုလှောင်ဖို့ အသုံးပြုပြီး တွက်ချက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် Name လို text တွေကိုတော့ မှတ်သားလို့ မရပါဘူး။
raw_input ကလည်း အပေါ်ဘက် ပုစ္ဆာမှာလို
ဒုတိယပုစ္ဆာမှာလည်း x=2, y=4 ပါပဲ။ တူအောင်ထားမှ ကွဲလွဲမှုကို တွေ့လွယ်ပါမယ်။
x+y မှာ ၂ခု ပေါင်းတာပေမယ့် '24' ရပါတယ်။ အဖြေမှားနေတာလား? ထင်စရာဖြစ်လာတယ်။
တစ်ကယ်က သူက text ကို သတ်မှတ်တာမို့ သူ့ဆီဝင်လာတဲ့ ကိန်းတွေကိုလည်း စာသားအဖြစ်သာ မှတ်ထားတယ်။
x+y မှာ 'MgZaw' လို့ ပြပြီး
y+x ဆို 'ZawMg' လို့ ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ် မှတ်သားရမယ့် အချက်က input ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတွေကို မှတ်သားတွက်ချက်ဖို့ သုံးတာ ဖြစ်ပြီး raw_input ကတော့ ကိန်းတွေရော စာတွေကိုပါ မှတ်သားနိုင်တယ်။ (ကိန်းတွေမှတ်လည်း တွက်လို့ မရဘူးနော်) text အနေနဲ့ပဲ မှတ်သားတာ။ ဒီ function ၂ခုအကြောင်း သိပါပြီနော်။ နောက်တစ်ခု ဆက်သွားရအောင်ပါ။
ခုတစ်ခါတော့ Comparison Operators ခေါ် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ဖန်ရှင်ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဖော်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ python မှာ အောက်ပါလိုင်းတွေကို တစ်ခုစီ ရေးကြည့်ပါ။
အထက်ပါ နှစ်ခုကို စမ်းကြည့်ရင် 4==4 က true လို့ ဖြေမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့4သည်4နဲ့ တူညီလား လို့ မေးထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 4==5 မှာတော့ false လို့ပဲ ဖြေပါမယ်။4က5နဲ့ မညီလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လို့ ရိုက်ကြည့်ရင် မှန်တယ်လို့ ဖြေပါမယ်။ != ဆိုတဲ့ symbol အတွဲကလေးက not equal (မညီမျှခြင်း) ပေါ့။
5 !=5ဆိုရင်တော့ မှားတယ်လို့ ဖြေပါမယ်။5နဲ့5က ညီနေလို့ပါ။
5 >3ဆို မှန်တယ်လို့ ဖြေမှာဖြစ်ပြီး5<3ဆိုရင် မှားတယ်လို့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။
5 >=3ဆို မှန်မှာဖြစ်ပြီး5<=3ဆိုရင်တော့ မှားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုပြောတာလေးတွေကို တစ်ခုစီ စမ်းသပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ပြီးရင် ကိန်းတွေကိုမဟုတ်ဘဲ စာသားတွေကိုပါ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်
>>> "see" > "zoo"
>>> "horse" > "aeroplane"
>>> "zoo" > "zebra"
code line တင်မဟုတ်ဘဲ အဖြေကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ။
False (ဘာလို့မှားလဲဆို z က နောက်ဆုံး အကြီးဆုံးမို့ပါ။aဆို ရှေ့ဆုံး အငယ်ဆုံးပါ)
True (ဒီမှာတော့ h ကaထက် ကြီးတယ်ဆိုတာ သေချာပါပြီ)
True (z ချင်းတူတဲ့အတွက် ဒုတိယအလုံးချင်း နှိုင်းယှဉ်လိုက်ပါတယ်။ zoo က o သည် zebra ကeထက် နောက်မှာ ရှိသောကြောင့် o ကပိုကြီးလို့ zoo က ပိုကြီးသွားတာပါ )
>>> 900000 > "forget"
>>> 9000 < "apple"
စာသားနဲ့ ကိန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ စာသားက ပိုကြီးပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ Conditional Statement လို့ခေါ်တဲ့ if , if else တို့အကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
command line (or) IDLE အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ သုံးပါ
Conditional Statements ဆိုတာက တစ်ခုခုဖြစ်မှ တစ်ခုခုရမယ့်ကိစဿစမျိုး (ဥပမာ - မိုးမရွာရင် ရုပ်ရှင်သွားရမယ်။ အောင်အောင်ဆိုရင် ဒီစာ ပေးလိုက်) စတဲ့ function တွေမျိုးအတွက်ပါ။ Conditional Statement ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ variable တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
x = "Mg Mg"
if x == "Mg Mg":
print "You are programmer."
အထက်ပါ ဥပမာပြီးရင် enter ၂ချက် ဆင်းကြည့်ပါ။ You are programmer. ဆိုပြီး စာကြောင်း ပေါ်လာပါမယ်။ (သတိထားရမှာက if စာကြောင်းပြီးလို့ print မစမီမှာ Tab တစ်ချက် ခုန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်)
နည်းနည်းလေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ တည်ဆောက်အသုံးပြုလိုက်တဲ့ variable က
x ကို Mg Mg လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ Mg Mg ဖြစ်ခဲ့ရင် You are programmer. ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို ထုတ်ပေးဖို့ပါ။
if passcode == 12345:
ဒါတွေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ enter ၂ချက် ဆင်းလိုက်တာနဲ့ Welcome ပေါ်လာမှာပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ password လေး ရေးဦးမှပါ :) 😋😋
if password != 12345
print "You cannot open"
ဒါမျိုး stirng အတွက်ကတော့ အဖြေ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါ။
if password == 67890
အထက်ပါ operation မျိုးအတွက်လည်း အဖြေ ထွက်မှာမဟုတ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော variable နှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသော Comparison မတူညီမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ if else သွားပါမယ်။
if ကတော့ ဒါဖြစ်ရင် ဒါထုတ် ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိသေးတာပါ။
else နဲ့ တွဲလိုက်ရင်တော့ အတော့်ကို အခြေအနေ တိုးတက်လာပါပြီ။
ဥပမာလေး ပြောရအောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က password စနစ်ကလေးတစ်ခု တံခါးမှာ တပ်ဆင်မယ် ဆိုပါစို့။ password ကို 12345 လို့ ထားတယ်ဆိုပါစို့။ password 12345 ဆိုရင် ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့် မဟုတ်ရင်တော့ ဖွင့်ပေးလို့ မရပါဘူး။ ခု နမူနာပြောတဲ့ အခြေအနေလိုမျိုးမှာ if else ကို သုံးပါတယ်။
အထက်ပါ ဥပမာအတိုင်းပဲ ရေးကြည့်ရအောင်ပါ။
if password == 12345:
print "Passwords correct."
print "Passwords incorrect."
အထက်ပါ ဥပမာတွေကို ဒီမှာပေးထားတာအပြင် ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးကြည့်ပါ။ ပျော်စရာကောင်းလာမှာပါ :)
အောက်မှာ ကျွန်တော် နမူနာ ရေးပြထားတာလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်
ကြည့်ပြီး သေချာ မှတ်မိတဲ့ထိ လေ့ကျင့်ကြပါခင်ဗျ။
ပြီးလို့ enter ၂ချက် ဆင်းလိုက်ရင် True ရပါမယ်။ ကျွန်တော် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့တာက
2 <5မို့ပါ
အကယ်၍ < နေရာမှာ > သုံးမိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေက မှားတယ်လို့ ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ထိ သင်ထားတာလေး နည်းနည်းလေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ခုမှ သင်ခန်းစာ ၂ခုပဲ ရှိသေးတာလေ နော
အဲဒီ ၂ ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး Program သေးသေးလေးတစ်ခု ဖန်တီးကြည့်ရအောင်ဗျာ
အရင်ဆုံး မိမိဘာသာ ဖန်တီးကြည့်ပါဦး။ မလုပ်တတ်မှ အောက်ပါ mov ကို ကြည့်ပါ
သင်ခန်းစာ ၃ ကြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
By KhitMinnyo on October 17, 2017